“CIA waxay isku dayday iney afgambi igu sameyso”….Madaxweynaha Eritrea. |
“CIA waxay isku dayday iney afgambi igu sameyso”….Madaxweynaha Eritrea.
Hargeisa(GNN):-Dowladda Eritrea ayaa soo saartay warmurtiyeed aan horay looga baran iyada oo warmurtiyeedkeeda ku eedeysay iney laanta sirdoonka Mareykanka ee CIA ay Eritrea u maleegtay afgambi. Waxayna xukumadda Asmara warmurtiyeedkeeda carrabka ku dhufatay laanta sirdoonka Israa’iilna iney afgambigaasi la damacsanaa gacan ka geysatay.
Afgambigi la damacsanana waxaa qayb ka ahaa ayey tiri xukumadda Asmara in kacdoonna shacab gudaha Eritrea laga abaabulo si awoodda dowladda loo wiiqo.
Iskudaygi loo sameeyey iney dowladaha Mareykanka iyo Israa’iil iney eedda loo soo jeediyey jawaab ka bixiyaanna ma noqon mid suuragasha.